IMIGAQO YEMITHETHO KA-UBER EKUHLALENI: EGhana, eKenya, eNigeria, eMzantsi Afrika, eTanzania, eUganda KUPHELA
Sifuna ukumonwabela u-Uber kwaye akhuseleke kumntu wonke. Le mithetho ingundoqo yenzelwe ukuqinisekisa ukuba abakhweli nabaqhubi banohambo lomgangatho ophezulu xa besebenzisa u-Uber. Nceda uthathe ixesha lokuyifunda. Ngenxa yokuba, nokuba ungumkhweli ozama ukusuka ku-A usiya ku-B—okanye ungumlingane ofuna ukuzuza imali njengomqhubi — okubalulekileyo yindlela oziphethe ngayo.
Phatha abantu okhwele nabo kunye nabaqhubi ngale ndlela onga ungaphathwa ngayo wena buqu: ngentlonipho. Kuyimbeko eqhelekileyo ukungakhwazi, uthukise okanye umbakraze ucango lwemoto. Kwaye ngokuzigcina ucocekile — nokuba ugodusa inkunkuma yakho okanye ucoca isiselo sakho esichithakeleyo — uya kuyigcina imoto yakho ikwimeko entle futhi uqinisekisa ukuba nomnye umntu ufumana ukukhwela okumkholisayo naye. Okubaluleke ngaphezu kwako konke, khumbula ukuba xa usebenzisa u-Uber uya kuhlangana nabantu abanokukhangeleka ngokwahlukileyo okanye abacinga ngokwahlukileyo kuwe. Nceda ukuhloniphe oko kungafani. Sifuna wonke umntu azive amkelekile xa esebenzisa u-Uber.
Banike isithuba esisesabo abakhweli nabaqhubi
Sonke sisixabisile isithuba esisesethu nesiyimfihlelo kuthi. Kuyinto elungileyo ukuncokola nabanye abantu. Kodwa nceda ungaphawuli ngendlela akhangeleka ngayo omnye umntu okanye ungabuzi ukuba ingaba akatshatanga na. Njengamkhweli, ukuba ufuna ukufownela umntu nceda uthethele phantsi ukuze ungaphazamisi umqhubi wakho okanye abanye abakhweli. Kwaye musa ukuphatha okanye uncwase abanye abantu abasemotweni. Njengesikhumbuzo, u-Uber akanawo umthetho wezesondo. Okuthetha ukuba awukho umgaqo olawula indlela yokuziphatha ngokwezesondo phakathi kwabakhweli nabaqhubi, naninina na.
Wonke umntu ufuna ukusuka ku-A aye ku-B ngokukhuselekileyo. Ngoko ke nceda uqiniseke ukuba uyawulandela umthetho wasekuhlaleni. Khangela amacebiso wethu okhuseleko lwabakhweli Amacebiso wethu okhuseleko lwabakhweli. Nxiba amabhanti wakho xa ungena emotweni — kwaye nceda uyishiye Ekhaya imipu yakho. Ngenene, abaqhubi banoxanduva olukhethekileyo ngokuphathelele kukhuseleko ku-Uber. Oko kuthetha ukugcina isantya esamkelekileyo, ukungabhali efownini ngelixa uqhubayo; ukusoloko usebenzisa indawo yokuxhoma ifowni; kwaye ungaze uqhube uphantsi kweempembelelo zotywala okanye iziyobisi. Futhi ukuba uyaqhuba kwaye uziva udiniwe, thatha isiqabu uphumle. Njengoko zisitsho njalo iingcali ukuba, “ukulala lelona nyathelo lokwenene lokuthintela elichasene nemingcipheko yokuqhuba ngokozela.”
Abantwana kufuneka babe phantsi kokonganyelwa
Ngabantu abadala kuphela abanokuba neakhawunti yomkhweli ku-Uber. Umzali okanye umntu omgcinileyo makaqinisekise ukuba abantwana bakhatshwa ngumntu omdala ngawo onke amaxesha.
Ingxelo enikeziweyo isenza sibe ngcono sonke
Nokuba ungumkhweli okanye ungumqhubi, nceda ukalishe uhambo lwakho ekupheleni kohambo. Ingxelo enyanisekileyo inceda ekuqinisekiseni ukuba wonke umntu uyayimela indlela aziphethe ngayo. Oku kuzimela kudala indawo yokungqongileyo ekhuselekileyo nehloniphileyo kubo bobabini abakhweli nabaqhubi. Kwaye ukuba kukho into eyenzeka ngexesha lokukhwela — nokuba yingozi yezithuthi yengxoxo — qiniseka ukuba unika ngokucofa “Nceda” kwi-app ukuze iqela lethu elixhasa Abakhweli likulandele.
Imigaqo engezantsi inceda ekucaciseni ezinye zeendidi ezithile ezinokubangela ukuba uphulukane nelungelo lakho lokuba ngumqhubu okanye umkhweli we Uber.
KUTHENI ABAKHWELI BENGALAHLEKELWA LUFIKELELO KU-UBER
Lo mgaqo-nkqubo unceda ekucaciseni iindidi zendlela zokuziphatha ezinokukhokelela ekubeni abakhweli balahlekelwe lufikelelo ku-Uber. Nceda ukhumbule ukuba, ukuba uhamba neqela, okanye uvumela abanye abantu bathathe iihambo kunye nawe ngeakhawunti yakho, nguwe onoxanduva lendlela abaziphethe ngayo emotweni.
Ukuqinisekisa indawo yokungqongileyo ekhuselekileyo nehloniphileyo kubo bonke abakhweli nabaqhubi
Indlela oziphethe ngayo ngelixa usebenzisa u-Uber inganefuthe elikhulu kukhuseleko nokukhululeka kwabaqhubi, kwakunye nabanye abakhwele kunye nawe. Imibandela yembeko. Kungeso sizathu esibangela ukuba ulindeleke ukuba wenze isigwebo esilungileyo kwaye uziphathe ngendlela endilisekileyo kwabanye abantu abasemotweni xa uhamba ngo-Uber—njengoko ubuya kwenza njalo kuyo nayiphi na indawo kawonke-wonke.
Nazi ezinye zezizathu ezingabangela ukuba ulahlekelwe lufikelelo ku-Uber njengomkhweli:
Ukonakalisa iimpahla zabaqhubi okanye zabanye abakhweli. Umzekelo, ukonakalisa imoto, ukwaphula okanye ukutshabalalisa ifowni, ukuchitha ukutya okanye isiselo ngabom, ukutshaya, okanye ukugabha okungenxa yokusela utywala ngokugqithisileyo.
Ukubambana ngezandla nomqhubi okanye abanye abakhweli. Njengoko izikhokelo zasekuhlaleni zicacisa, akumele ubambe okanye uncwase abanye abantu abasemotweni. Njengesikhumbuzo, u-Uber akanawo umthetho wezesondo. Okuthetha ukuba awukho umgaqo olawula indlela yokuziphatha ngokwezesondo phakathi kwabakhweli nabaqhubi, nakanjani na. Kwaye ungaze umbethe okanye umonzakalise umqhubi okanye omnye umkhweli.
Ukusebenzisa ulwimi olungafanelekanga noluhlukumezayo okanye ukuthetha ngezandla. Umzekelo, ukubuza imibuzo eyeyomntu ubuqu ngokungaphezulu, ukusebenzisa izoyikiso zomlomo, nokwenza iikhomenti okanye ukuthetha ngezandla zodlame, zesondo, zocalucaluo, okanye ezokungabinayo intlonipho.
Ukudibana okungafunekiyo nomqhubi okanye nomnye umkhweli emva kokuba luphelile uhambo. Umzekelo, ukuthumela umyalezo ngefowni, ukufownela okanye ukutyelela umntu ngesiqu emva kokuba luphelile uhambo. Khumbula, unako ukufownela nokuthumela umyalezo ngefowni umqhubi wakho ngokuthe ngqo kwi-Uber app ngaphandle kokwabelana ngenombolo yefowni yakho ubuqu. Oku kuthetha ukuba inombolo yefowni yakho ihlala ingaziwa mntu kwaye ayinikezwa kumqhubi.
Ukwaphula umthetho wasekuhlaleni ngelixa usebenzisa u-Uber. Umzekelo, ukuza nezinto eziphethe utywala okanye iziyobisi emotweni; ukuhamba niliqela elikhulu eligqithisileyo kwinani lamabhanti ezihlalo emotweni; ukucela abaqhubi ukuba baphule imithetho yezithuthi ekuhlaleni njengesantya esamkelekileyo; okanye ukusebenzisa u-Uber ukwenza ulwaphulo umthetho, ukuquka izihambisa nokuthengisa iziyobisi nabantu okanye ukuxhatshazwa kwabantwana ngezesondo.
Ukuba siyaziswa ngezi ndidi zokuziphatha ngokusengxakini, siya kuqhagamshela kunye nawe ukuze senze uphando ngazo. Ngokuxhomekeke kubume benkxalabo, siya kuyimisa iakhawunti yakho ngexesha lokuphanda kwethu. Ukuba imibandela ephakanyisiweyo iyemandundu okanye ikukuphindwa kobutyala, okanye awuvumi ukusebenzisana nathi, unokulahlekelwa lufikelelo ku-Uber. Nayiphi na indlela yokuziphatha equka udushe, ukungaziphathi kakuhle ngezesondo, uhlukumezo, ucalucalulo, intshukumo engekho semthethweni ngelixa usebenzisa u-Uber oko kungabangela ukuba ulahlekelwe yiakhawunti yakho ngoko nangoko. Ngaphezu koko, xa kubandakanyeka nonyanzeliso lomthetho, siya kusebenzisana nophando lwabo ngokuvumelana nezethu iZikhokelo zoNyanzeliso loMthetho.
Njengomkhweli, uyavumelana ne- iMiqathango yethu yoSetyenziso  xa usayinela iakhawunti yakho. Sinokuthatha inyathelo ngokuchasene nawe ngokutyeshela le miqathango, ukuquka ukuyivala umphelo iakhawunti yakho. Umzekelo ukungaphumeleli ukugcina inkcukacha yeakhawunti ehlaziyiweyo echanekileyo nepheleleyo, ukuquka indlela yokubhatala engekho semthethweni okanye ephelelwe lixesha efayileni; ukuvumela umntu ongahlangabezaniyo neemfuneko ezincinci zobudala ukuba asebenzise iakhawunti yakho ngelixa ungakhatshwayo, okanye ukuba wena ubuqu awuhlangabezani nalo mfuneko yobudala.
Ukuthintelwa kwezixhobo zokudubula
U-Uber uyabathintela abakhweli nabaqhubi ekubeni bathwale izixhobo zokudubula emotweni ngelixa kusetyenziswa i-app yethu. Ungafunda okuninzi ngomgaqo-nkqubo wethu wothintelo lwezixhobo zokudubula apha.  Ukuba waphula umgaqo-nkqubo wethu wothintelo lwezixhobo zokudubula ku-Uber, uya kulahlekelwa lufikelelo ku-Uber.
U-Uber unomgaqo-nkqubo ongalunyamezeliyo ucalucalulo lwalo naluphi na uhlobo. Oku kuthetha ukuba uya kulahlekelwa lufikelelo kwiakhawunti yakho ukuba ufunyenwe unocalucalulo ngakubaqhubi okanye abanye abakhweli ngokubhekiselele kuhlanga, inkolo, imvelaphi ngokobuzwe, ukhubazeko, uhlobo lweqabane azikhethela lona ngokwesondo (sexual orientation), isondo, ubume bomtshato, isazisi ngokwesini, ubudala okanye naluphi na olunye uphawu olukhuselweyo ngaphantsi komthetho osetyenziswayo.
Ubuqhophololo okanye indlela yokuziphatha engekho semthethweni
Ubuqhophololo okanye indlela yokuziphatha engekho semthethweni iyijongela phantsi intembeko akhelwe kuyo u-Uber. Sinako ukuyenza ingasebenzi nay(z)iphi na iakhawunti eyayanyaniswa nolu hlobo lwentshukumo, ukuquka: ukwaziswa kweentengiso ezingokuxhatshazwa; iyelenqe eliphakathi komkhweli nomqhubi; iintlawulo zeengxoxo zobuqhophololo okanye izizathu ezingekho semthethweni; okanye iiakhawunti eziphindiweyo.
KUTHENI ABAQHUBI BENGALAHLEKANA NOFIKELELO KU-UBER
Ukuba ungumqhubi, kwaye iakhawunti yakho ibhlokiwe okanye yenziwe ayasebenza okwexeshana, oko kunciphisa amandla wakho okufumana umvuzo. Kungeso sizathu esikholelwa ekubeni kutheni kubalulekile ukuba nemigaqo-nkqubo ecacileyo ecacisa iimeko ongalwalelwa phantsi kwazo ufikelelo ku-Uber; indlela (ukuba ikhona) ongayisebenzisa ngayo kwakhona i-app; futhi ukuba unako ukwenza izibheno kwezi zigqibo. 
Kuya kusoloko kukho izinto ezingakhange zibonwe ngaphambili ezinokukhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho yomqhubi ekugqibeleni — kwaye siya kukuhlaziya rhoqo ngalo mgaqo-nkqubo — kodwa oku kulandelayo kungunobangela owaneleyo wokuba u-Uber athathe inyathelo: umgangatho wodidi; ukhuseleko; ubuqhophololo; nocalucalulo.
Abakhweli abasebenzisa u-Uber balindele ukuba abaqhubi babo baqhube ngokukhuselekileyo, kwaye babe nembeko nobungcali. Okukhona uya uphakama umgangatho wodidi lwenkonzo, kokukhona abakhweli abaninzi befuna ukuthatha iihambo, into leyo ethetha amathuba amaninzi wokuba abaqhubi bamkele imali. Inkonzo embi inefuthe elibi ekuhambeni kwexesha. Kukho iindlela ezininzi esiwulinganisa ngayo umgangatho wodidi lomqhubi, ezizezona zibaluleke kakhulu zezi: Ukalisho ngeeNkwenkwezi neQondo lokuRhoxisa.
Emva kohambo ngalunye, abaqhubi nabakhweli bayakwazi ukukalishana kwisikali esisuka kwinkwenkwezi enye ukuya kwiinkwenkwezi ezintlanu, kwakunye nokunikeza ingxelo yokuba luhambe njani na uhambo. Le nkqubo indlela-mbini yenza wonke ubani akwazi ukuzimela ngendlela yokuziphatha kwakhe. Ukuzimela kunceda ekudaleni indawo yokungqongileyo ehloniphekileyo nekhuselekileyo kubo bobabini abaqhubi nabakhweli . Abaqhubi bangalubona ukalisho lwabo lwangoku kwithebhu yoKalisho ye-app ka-Uber Partner.
Ingaba lubalwa njani ukalisho lwam njengomqhubi? Ukalisho lwakho lusekeke kwiavareji yenani leenkwenkwezi abakunike zona abakhweli emva kohambo (ukusuka kwinkwenkwezi e-1 ukuya kwiinkwenkwezi ezi-5), ukuya kutsho kuma-500 okaliso lweehambo zakho ezigqithileyo kwinani elipheleleyo leehambo ezikalishiweyo ozithathileyo, ukuba zingaphantsi kunama-500.
Eyona ndlela ilula yokulugcina luphezulu ukalisho lweavareji yakho kukunikeza inkonzo entle kuzo zonke iihambo. Abaqhubi abasebenzisa u-Uber banikeza inkonzo egqibeleleyo, ngoko ke iihambo ezininzi zihamba kakuhle. Kodwa siyazi ukuba ngamanye amaxesha uhambo aluhambi kakuhle—kungeso sizathu esibangela ukuba sijonge kuphela kukalisho lweavareji yakho ngaphezu kweehambo zakho zangoku ezingama-500 (okanye iakhawunti yakho yazo zonke iihambo ezikalishiweyo, ukuba zingaphantsi kwama-500). Oku kukunika ithuba lokuya uphucuka ekuhambeni kwexesha.
Yintoni ekukhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Kukho ukalisho lweavareji encinci kwisixeko ngasinye. Oku kungenxa yokuba kukho ukungafani ngeenkcubeko kwindlela abantu abakalishana ngayo kwizixeko ezahlukileyo. Siya kukulumkisa njengoko ixesha lihamba ukuba ukalisho lwakho lufikelela kule limithi, kwaye nawe uya kufumana inkcukacha emalunga neezifundo zokuphucula umgangatho wodidi (quality improvement courses) enokukunceda uphucuke. Nangona kunjalo, ukuba ukalisho lweavareji yakho lusaqhubeka ukwehlela ngaphantsi kobuncinane emva kwezaziso ezininzi, uya kulahlekelwa lufikelelo kwiakhawunti yakho. Sinokukuvumela ukuba uphinde ufikelele kwiakhawunti yakho ukuba ungasinika ubungqina bokuba uzigqibile ezinye zezi zifundo zokuphucula umgangatho wodidi.
Ukurhoxiswa komqhubi kuxa wamkela isicelo sohambo uze emva koko ulurhoxise uhambo. Ukurhoxiswa kudala amava amabi omkhweli kwaye kubachaphazela kakubi abanye abaqhubi. Siyaqonda ukuba kunokubakho amaxesha apho kunokuthi gqi into enokwenza ukuba ulurhoxise uhambo olwamkeleyo. Kodwa ke kubalulekile ukuzinciphisa izirhoxiso ukwenzela ukuthembeka kwenkqubo.
Ingaba libalwa njani iqondo lokurhoxisa kwam? Iqondo lokurhoxisa lisekeke kwinani leehambo ezirhoxisiweyo ngaphezu kwenani lilonke leehambo ozamkeleyo. (Umzekelo, ukuba uye wamkela iihambo ezili-100 kwaye isi-4 sazo ezo hambo zirhoxisiwe, iqondo lokurhoxisa kwakho liya kuba yi-4%.) Abaqhubi bomgangatho wodidi oluphezulu baneqondo lokurhoxisa elingaphantsi kune-5%.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Isixeko ngasinye sineqondo lokurhoxisa esikhulu, esisekeke kwiavareji yeqondo lokurhoxisa kwabaqhubi kulo ndawo. Siya kukulumkisa amaxesha amaninzi ukuba iqondo lokurhoxisa kwakho liphezulu kakhulu okanye ukuba usoloko urhoxisa rhoqo kunabanye abasesixekweni sakho, emva koko uya kukhutshelwa ngaphandle kwe-app. Ukuba iqondo lokurhoxisa kwakho liyaqhubeka ukugqithisa ilimithi enkulu, unokulahlekelwa lufikelelo lwakho kwiakhawunti yakho.
Amaqondo okwamkela aphezulu ayinxalenye ebalulekileyo yokuthembeka, yenkonzo yomgangatho wodidi oluphezulu, kodwa ukungazamkeli izicelo zeehambo akukukhokeleli ekulahlekelweni yiakhawunti yakho umphelo.
Ukuzamkela rhoqo izicelo zeehambo kunceda ekwandiseni imivuzo yabaqhubi kwaye kuyigcina ihamba kakuhle inkqubo ngokuthe phuncuncu. Siyazi ukuba ngamanye amaxesha kukho izinto ezivelayo ezikuthintela ukuba wamkele zonke izicelo zeehambo, okanye unokufuna ukuthatha ikhefu. Kodwa ukungakwamkeli ukuthunyelwa kubangela ulibaziseko kwaye kukuthobela ezantsi ukuthembeka kwenkqubo. Ukuba awufuni ukuzamkela iihambo, phuma (log off).
Ukuba uyazikhaba rhoqo izicelo zeehambo, siya kucingela ukuba awusafuni kwamkela ezinye iihambo kwaye uya kukhutshelwa ngaphandle kwe-app.
U-Uber usebenzisa itekinoloji ukugcina abaqhubi nabakhweli bekhuselekile, umzekelo ngokulanda umkhondo nge-GPS kulo lonke uhambo nokuvumela abakhweli babelane ngeehambo zabo ngamaxesha okwenene kunye neentsapho okanye abahlobo. Konke oku kuxhaswe yinkqubo eyomeleleyo yokuhluzwa kwabaqhubi kwangaphambili. Kwakhona sineqela elizinikele ekusabeleni kwizehlo elithi litsalelwe iminxeba 24/7 ukuze liphande izehlo zokhuseleko.
Izenzo ezoyikisa ukhuseleko lwabaqhubi nabakhweli ziya kuphandwa kwaye ukuba zingqinisekisiwe, zikhokelela ekuvalweni kweakhawunti yakho umphelo. Umzekelo:
Ukudibana okungafunekiyo nomqhubi okanye nabanye abakhweli emva kokuba luphelile uhambo. Umzekelo, ukuthumela umyalezo ngefowni, ukufownela okanye ukutyelela umntu ngesiqu emva kokuba luphelile uhambo.
Ukwaphula umthetho wasekuhlaleni ngelixa usebenzisa u-Uber. Umzekelo, ukuthumela umyalezo ngefowni ngelixa uqhubayo; ukuqhuba ngesantya esiphezulu okanye ukwaphula imithetho yezithuthi ekuhlaleni; kunye nokusebenzisa u-Uber ukwenza ulwaphulo umthetho, ukuquka izihambisa nokuthengisa iziyobisi nabantu okanye ukuxhatshazwa kwabantwana ngezesondo.
Ukuqhuba ngokukhuselekileyo. U-Uber ulindele ukuba abaqhubi abasebenzisa i-app baqhube ngokukhuselekileyo ngamaxesha wonke.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Ukuba sazisiwe ngezi ndidi zeendlela zokuziphatha ziziingxaki, siya kuqhagamshelana nawe ukuze siziphande. Ngokuxhomekeke kubume benkxalabo, sinokuyibekela bucala iakhawunti yakho ngexesha lophando lwakho. Ukuba imibandela ephakanyisiweyo yemandundu okanye ngamatyala aphindwayo, okanye wena awufuni ukusebenzisana nathi, unokulahlekelwa lufikelelo ku-Uber. Nayiphi na indlela yokuziphatha equka udushe, ukungaziphathi kakuhle ngokwezesondo, uhlukumezo, ucalucalulo, okanye intshukumo engekho semthethweni ngelixa usebenzisa u-Uber ingabangela ukulahlekelwa yiakhawunti yakho ngoko nangoko. U-Uber naye uya kuyivala iakhawunti yakhe nawuphi na umqhubi afumana ngaye izikhalazo eziliqela okanye ezimandundu zokuqhuba kakubi, ngokungakhuselekanga, okanye ukuphazamiseka ngelixa asebenzisa i-app ka-Uber. Ngaphezu koko, xa kukho nonyanzeliso lomthetho olubandakanyekayo, siya kusebenzisana nophando lwabo ngokuvumelana nezethu iZikhokelo zoNyanzeliso loMthetho.
Ukungabikho kokunyanyezelwa kweZiyobisi noTywala
U-Uber akakunyamezeli ukusetyenziswa kweziyobisi okanye utywala ngabalingane ngelixa kuqhutywayo.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? I-akhawunti yakhe nawuphi na umqhubi ofunyanwa engaphantsi kwefuthe leziyobisi okanye utywala ngelixa asebenzisa i-app ka-Uber iya kuvalwa umphelo. U-Uber futhi unokuyivala iakhawunti yakhe nawuphi na umqhubi ofumana izikhalazo eziliqela nokuba azingqinisekiswanga ngokumalunga nokusetyenziswa kwesiyobisi okanye utywala.
Ukuthotyelwa kweMithetho yeendlela
Silindele ukuba abaqhubi abasebenzisa i-app ka-Uber bayithobele yonke imithetho esebenzayo yeendlela ngawo onke amaxesha.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? U-Uber unokuyivala umphelo iakhawunti yakho kwimisetyenzana enjengale: ukuzixaxekisa ngentshukumo engekho semthethweni ngelixa usebenzisa i-app ka-Uber; ukungabi namaxwebhu asemthethweni obhaliso lwesithuthi okanye ilayisensi yomqhubi; kunye nokufumana izicaphulo ezikhulu zokwaphulwa kwemithetho yezendlela ebonisa ukuqhuba ngokungakhuselekanga, ngelixa asebenzisa i-app ka-Uber.
Bonke abaqhubi abafuna ukusebenzisa i-app ka-Uber kufuneka baye kwinkqubo yokuhluzwa ukuqinisekisa ukhuseleko nokuthobela ngeemfuno zethu.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Siya kuyivala umphelo iakhawunti yomqhubi ukuba irekhodi yemoto yesiqhelo okanye ukuhlolwa kwemvelaphi kudandalazisa ukwaphulwa kwemigangatho yokhuseleko ku-Uber okanye lwezinye iimfuneko ezifunwa ngabalawuli basekuhlaleni.
Ukugcina unyaniseko nokhuseleko lohambo ngalunye lwabasebenzisi bonke, imisetyenzana eqhutyelwa ngaphandle kwenkqubo ka-Uber—njengokuchola-chola okungaziwayo—akwamkelekanga.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Siya kuthatha inyathelo ngakumqhubi ngemisetyenzana enjengale: ukwamkela iiheyile zasesitalatweni ezingekho semthethweni ngelixa asebenzisa i-app ka-Uber; ukwenzakalisa ishishini okanye igama lorhwebo, njengokusetyenziswa okungagunyaziswanga kophawu lorhwebo okanye ipropati yobungqondi ka-Uber, okanye kungenjalo owaphula isivumelwano sokuqhuba no-Uber; kunye nokurhoxisa iihambo ezifunyenwe nge-app, ukuze umqhubi ahlawulise umkhweli ngohambo ngokungaphandle kwenkqubo ka-Uber.
Intshukumo yobuqhophololo iyijongela phantsi intembeko eyakhiwe ngu-Uber. Kungeso sizathu esibangela ukuba sihlale sikhangela ubuqhophololo obenziwa ngabakhweli nabaqhubi abadlala ngeenkqubo zethu.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Siya kuyivala nayiphi na iakhawunti okanye iiakhawunti ezayanyaniswa nentshukumo yobuqhophololo, enokuquka: ukwandiswa kwexesha okanye komgama wohambo ngabom; ukwamkela iihambo ngaphandle kweenjongo zokuzigqiba, okuquka ukuxhokonxa abakhweli ukuba barhoxe; ukudala iiakhawunti zobuxoki zomkhweli okanye zomqhubi ngeenjongo zobuqhophololo; ukwenza amabango eemali okanye eentlawulo zobuqhophololo, njengeemali zobuxoki zokucoca; kunye nokwamkela okanye ukugqibezela ngabom iihambo zobuqhophololo okanye zobuxoki.
INkcukacha zoBuqu ezichanekileyo
I-app ka-Uber yenzelwe ukunikeza abakhweli inkcukacha ebasiza ngabaqhubi kunye neemoto zabo, njengamagama wabo, umfanekiso weprofayile, imodeli kunye nenombolo yelayisensi yemoto, phambi kokuqalisa kohambo. Inkcukacha engachanekanga okanye engahlaziywanga idala ukubhidana phakathi kwabakhweli kwaye inganciphisa amava wabo ngo-Uber.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Siya kuyivala ngemisetyenzana enjengale: ukunikeza u-Uber inkcukacha engachanekanga; ukuvumela omnye umntu asebenzise iakhawunti yakho; kunye nokuthatha uhambo usebenzisa imoto engavunywanga.
Ukongeza koko, siya kuthatha inyathelo ukuthintela nawuphi na umqhubi onamaxwebhu angekho semthethweni xa efunwayo — njengelayisensi yomqhubi ephelelwe lixesha — ekubeni angene kwi-intanethi ade abe umqhubi lowo unikeza u-Uber inkcukacha ehlaziyiweyo.
Imishini ka-Uber kukunxibelelanisa abakhweli kwezothutho ezithembekileyo, kwiindawo zonke ukwenzela umntu wonke. Sinomgaqo-nkqubo ongalunyamezeliyo ucalucalulo nolwaluphi na uhlobo ku-Uber.
Yintoni ekhokelela ekubeni ulahlekelwe lufikelelo kwiakhawunti yakho? Akwamkelekanga ukungafuni ukunikeza iinkonzo ezisekeke ekubeni ubani uya phi na, okanye uneempawu ezinjani na ngokohlanga, inkolo, imvelaphi ngokobuzwe, ukhubazeko, uhlobo lweqabane azikhethela lona ngokwesondo (sexual orientation), isondo, ubume bomtshato, isazisi ngokwesini, ubudala okanye naluphi na olunye uphawu olukhuselweyo ngaphantsi komthetho wamazwe amanyeneyo, welizwe okanye wasekuhlaleni. Izenzo ezinjengezi ziya kubangela ukuvalwa umphelo kweakhawunti yakho.
Sifuna ukwandisa ezothutho ekunokukhethwa kuzo ukwenzela abakhweli abanokhubazeko. Kungeso sizathu esibangela ukuba sibe nenkcukacha efumanekayo eyenzelwe abaqhubi ngesi sihloko. Bona apha ukufumana okuninzi ngokuzibophelela kuka-Uber kufikelelo ngokulula. Silindele ukuba abaqhubi abasebenzisa i-app ka-Uber bathobelane nayo yonke imithetho yamazwe amanyeneyo, eyelizwe okanye eyasekuhlaleni elawula ezothutho lwabakhweli abakhubazekileyo, ukuquka inkonzo yezothutho lwezilwanyana.
Ukubuyela kwiNdlela yaseMva kokuValwa
Ukuba iakhawunti yakho iye yavalwa ngezizathu zomgangatho wodidi njengokalisho lweenkwenkwezi eziphantsi, unokuba nalo ithuba lokubuyela endleleni. Khangela kwiqela lakho lika-Uber ekuhlaleni okanye utyelele help.uber.com ukufumana okuninzi.
June umhla we 30th, 2017
 IMiqathango yoSetyenziso ingafunyanwa apha yelizwe ngalinye: iGhana, iKenya, iNigeria, uMzantsi Afrika, iTanzania, iUganda.
 Ukuya kokuvunyelwe ngumthetho osetyenziswayo.
 Lo mgaqo-nkqubo awubachaphazeli abaqhubi abasebenzisa i-app ka-Uber app ye-UberRUSH ne-UberEATS.